Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 29
Ny maizina ve ny tsy fisian'ny mazava, sa misy zavatra hafa mampiavaka azy ary ilay toerana ilan'ny hazavana. Raha miavaka sy misaraka izy ireo, inona ny haizina ary inona ny mazava?
Ny haizina dia tsy "tsy fisian'ny mazava." Tsy ny maizina ny hazavana. Ny haizina dia zavatra ao aminy, fa tsy hazavana. Ny haizina dia mety haka ny hazavana sy ny hazavana kely, fa ny hazavana kosa handroaka ny haizina. Ny fahazavana dia handresy ny haizina amin'ny alàlan'ny fiakarana sy hanazavana ny haizina. Ny hazavana sy ny haizina izay hitantsika amin'ny alalan'ny fahatsapana dia tsy fahazavana sy maizina ao anatiny, na dia izay hitantsika fa maivana sy maizina aza dia niaviany tao amin'ny hazavana sy ny maizina. Amin'ny maha-izy azy ny haizina dia zava-mahadomelina, izay no fototry ny fototry ny fisehoana rehetra. Amin'ny toerany tany aloha, dia mangina izy ary mitovy manerana azy irery. Tsy mahatsiaro tena, tsy manam-pahaizana ary tsy mikorontana. Ny fahazavana dia ny hery izay avy amin'ny faharanitan-tsaina izay nandia ireo fivoarana ary ambony na mihoatra ny fisehoana azy. Rehefa mitantana ny herin'ny hazavana amin'ny zavatra tsy misy fepetra sy ny homogeneous ny haitao, dia ny maizina izany, ny ampahany amin'ny akora na maizina, ary ny làlana izay itarihana ny hazavana dia manomboka miasa. Miaraka amin'ny fiandohan'ny hetsika, ny singa izay lasa iray dia mitombo roa. Amin'ny asa maizina na ny akora dia tsy singa fa indroa. Io fahalalahan-javatra na haizina io dia fantatra amin'ny resaka fanahy. Ny Fanahy sy ny olana dia ny fanoherana roa ny zavatra tokana, izay zavatra iandohany, fa ny asa ara-panahy no aseho. Ny singa izay misy fizarana mizara ho raharaha ara-panahy, ary koa ny resaka manala-tsaina amin'ny fitambarany, dia nampiaiky azy ireo ary ny fiandohan'ny ray aman-drenin'izy ireo ary ny antony mahatonga ny fihetsik'izy ireo na ny fisehoany. Ny tsy fitovian-kevitra dia ny fototry ny singa tsy hita lany ny faobe ary koa ny fitambarany. Ny fahazavana no antony mahatonga ny fisehoana sy ny hetsika ao amin'ny vondrona tsirairay ary koa ny fitambarany fitambarany. Ka ny ao amin'ny vondrona tsirairay tsy hita maso, ary koa mandritra ny fotoana hisehoan'ny fitambarany manontolo dia aseho: ny raiam-pianakaviana ho toy ny singa ary ny hery mihetsika ho hazavana. Ao amin'ny vondrona tsirairay antsoina hoe raharaha ara-panahy dia mety ho ny ray aman-dreny sy ny akora ary ny hery. Ny fahazarana dia aseho amin'ny ampahany amin'ny unit tsy hita maso izay antsoina hoe raharaha, ary ny hazavana dia aseho amin'ny lafiny iray na ampahany amin'ny singa tsy hita tsy mitovy izay antsoina hoe fanahy. Ny universite rehetra na ny fisehoana dia nantsoina avy amin'ny singa tsy mitombina na ny maizina ho fisehoan'ny alàlan'ny herin'ny fahatsiarovan-tsaina, ary io hazavana io dia mitazona ny raharaha ara-panahy ka izany dia nantsoina tsy mihetsika mandritra ny vanim-potoana fisehoany. Nandritra ny vanim-potoana fisehoana dia ny fahazavana izay misy amin'ny fisehoana amin'ny maizina no antony mahatonga ilay antsointsika hoe hazavana. Ny zavatra miseho dia antony mahatonga ny antsointsika hoe haizina. Ny fahazavana sy ny maizina dia toa mifanipaka foana ary toa mifanome isaky ny fisehoana avokoa. Andro aman-alina, mifoha sy matory, ny fiainana sy ny fahafatesana, ireo mifanohitra na manohitra ny zavatra mitovy. Ireo mpanohitra ireo dia mihetsika mifandimby amin'ny fotoana fohy na maharitra mandra-pahazavana ny maizina. Samy toa mitovy amin'ny tsy ilaina ny tsirairay na dia samy manana ny ilany azy avy aza. Manana ny haizina sy ny mazava ny olona. Ny maizim-pito no ananan'ny olona, ​​ary ny sainy no hazavana. Fa tsy izany no fahitana matetika. Toa ny maizina ihany ny saina. Ny ao an-tsaina dia maizina tokoa ny tsindry. Izay heverina ho avy amin'ny masoandro, dia antsoina hoe tara-pahazavana. Ny saina sy ny antsoiny hoe hazavana dia toy ny maizina rehefa ny saina, ny taratra dia manazava ny herin'ny fahendren'ny ray aman-dreny. Ny tara-pahazavana sy ny fieritreretan'ny saina azy dia mety ho tonga amintsika na dia ny saina aza dia tafiditra ao anaty sy mifanohitra amin'ny haizina; amin'izay dia ho hitantsika na taratry ny tena fahazavana ny hazavana. Ny haizina dia mitoetra ary ovaina ho hazavana maharitra rehefa resin'ny fieritreretana sy asan'ny sain'ny saina.
Inona no atao hoe radium ary ahoana no ahafahana manipy hery tsy mitsaha-mitombo tsy misy fiantraikany sy fahaverezan'ny herin'ny tenany sy ny vatany, ary inona no loharanon-kery lehibe amin'ny radio?
Heverina fa ny mpanoratra ny fanontaniana dia mahalala tsara ny fanambarana siantifika momba ny fahitana ny tara-pahazavana vao haingana, toy ny nesorina azy tao pitchblende, ny fahitan'i Madame Curie, ny heriny maivana, ny vokatry ny zavatra nataony tamin'ny vatana hafa, ny kalavola sy ny sarotra manatrika ny famokarana.
Radium dia toe-javatra ara-batana izay misy hery sy vola kokoa noho ny ara-batana izay aseho amin'ny fahatsapana. Raharaham-batana ny resaka Radium amin'ny fifandraisana hafa ary ny hery izay matetika noheverina fa hypothetical. Etera sy ireo hery ireo dia faratampony kokoa noho ny ara-batana ary izy ireo dia mihetsika na amin'ny alàlan'ny zavatra atao hoe zavatra ara-batana, na diamondra ny etona hidrogen. Raha tsy noho ny raharaha ethereal na hypothetika amin'ny raharaha ara-batana dia tsy hisy fiovana na fanimbana ny raharaha ara-batana. Ny fihetsika feno finaritra amin'ny alàlan'ny raharaha matotra dia miteraka ny fampifangaroana «simika» sy fanovana ilay raharaha amin'ny fampiasana azy mahazatra ary toy ny nifandraisan'ny simia.
Radium dia raharaha ara-batana izay ampiharina mivantana na amin'ny alàlan'ny raharaha astraloma tsy misy antony fahatelo ary tsy ovana fiovan'ny fihetsika fanoherana. Ny zavatra ara-batana hafa dia amboarin'ny zavatra astral, saingy amin'ny ambaratonga kely kokoa noho ny taratra. Amin'ny ankapobeny, ny vokatry ny hetsika astral amin'ny raharaha ara-batana hafa dia tsy azo ekena satria ny zavatra ara-batana dia tsy afaka manolotra ny fifandraisana sy ny fanoherana ny resaka astral izay omen'ny radium, ary ny ankamaroan'ny raharaha dia tsy mifandraika mivantana amin'ny resaka astral toy ny radium. Ny singa simika tsy misy fetra sy tsy azo ekena dia misy amin'ny toe-javatra rehetra. Saingy hatramin'izao, ny pitchblende dia toa loharano ahazoana azy ireo be indrindra, na dia kely aza izany. Rehefa voatambatra ho marobe ny singa nantsoina hoe radium, dia mihetsika mivantana sy mihetsika amin'ny alàlan'ny kalitao ny raharaha astral.
Ny onjam-peo fampielezampeo dia tsy, araka ny ankehitriny, noho ny fitomboany na ny fiparitahany avy amin'ny tenany ao aminy. Ny toe-javatra ara-batana izay misy ny radiom dia tsy manome ny onjam-peo na hery hafa izay miseho ao aminy. Tsy hery i Radium, fa fampiasan-kery. (Matetika roa ny zava-dehibe ary misy amin'ny planina samy hafa. Eo amin'ny fiaramanidina tsirairay dia tsy misy dikany rehefa tsy mavitrika sy hery rehefa mavitrika. Koa ny zavatra ara-batana dia zavatra mavitrika ary hery ny hery. Ny fiaramanidina dia raharaha mavitrika.) Radium no vatana izay asehon'ny astral. Radium dia momba ny tontolo ara-batana; Ny hetsika radio dia zavatra avy amin'ny tontolon'ny astral izay aharihary amin'ny alàlan'ny fantsom-batana. Ny tontolon'ny astral dia manodidina sy amin'ny tontolo ara-batana, ary, satria tsara kokoa ny raharaha, dia ao anaty ary amin'ny alàlan'ny zavatra ara-batana matanjaka, satria hoy ny siansa fa ny eter dia ao anaty sy amin'ny alàlan'ny valan-javaboary, na satria fantatra fa mandeha ny herinaratra ao ary amin'ny alàlan'ny rano. Toy ny labozia manome hazavana, ny hazavana dia mamoaka jiro na angovo. Fa tsy toy ny labozia, tsy hodorana izy io amin'ny fanomezana ny hazavana. Tahaka ny mpamokatra na tariby herinaratra izay toa miteraka hafanana na hazavana na herinaratra dia toa manondraka na mampandeha angovo ny radiom; ary dia toy izany, angamba. Fa ny jiro na hery hafa izay toa novokarina dia tsy napetraky ny tariby. Fantatra fa tsy avy amin'ny dynamo na amin'ny tariby herinaratra ny herinaratra. Fantatra ihany koa fa ny jiro izay miseho ho hafanana na jiro na herinaratra dia tarihin'ny tariby. Amin'ny fomba mitovy, io toetra io na hery ampiasain'ny radio-hetsika dia miseho amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana izay tsy fantatra ankehitriny amin'ny siansa. Fa ny loharanom-pahalalana dia tsy radium fa ny loharanon'ny herinaratra dia dynamo na tariby. Ny partan'ny vatany dia atsipy sy hodorana na ampiasaina amin'ny ambaratonga kely kokoa noho ny sombin-tariby dinamo na tariby herinaratra amin'ny alàlan'ny hetsika ataon'ny angovo elektrika. Ny loharanom-pahalalana izay miseho amin'ny alàlan'ny radiom dia mitovy amin'ny loharanon'ny fisehoan'ny herinaratra. Samy avy eo ilay loharano iray ihany. Ny tsy fitovian'ny fisehoan'ny herinaratra ho toy ny hafanana, hazavana na hery ary izay aseho amin'ny alàlan'ny radiom-batana dia eo amin'ny sehatry ny fisehoana fa tsy amin'ny herinaratra na hetsika radio. Ny singa mampiavaka ny dynamo, generator na tariby, dia tsy mitovy amin'ny kalitao izay anaovana radiom. Ny raharaha astral sy ny hery izay miasa amin'ny raharaha astral dia mihetsika mivantana amin'ny taratra tsy misy antony hafa na fanelanelanana. Ny zava-misy izay mandeha amin'ny alàlan'ny tariby herinaratra dia aseho amin'ny anton-javatra hafa, toy ny bateria, ny magneto, ny mpamokatra, ny dynamos, ny etona ary ny solika. Ny iray amin'ireo antony ireo dia tsy takian'ny radium satria mifandray mivantana ary ny tenany no mamela ny raharaham-pifandraisana hiseho amin'ny alalàn'ny radiom.
Fantatra fa tsy mandeha amin'ny tariby ny jiro elektrika, fa manodidina ny tariby. Ho hita ihany koa fa tsy toy ny radiasy ny hetsika-onjam-peo, fa manodidina na momba ny radiom. Ny andiana Elektronika dia nanandrana ary mbola niezaka namorona fomba sasany ahafahan'ny angovo herinaratra hanehoana sy hitarika azy tsy mampiasa setroka na solika na hetsika galvanika. Manoro hevitra sy manome sary an-tsaina ny fomba mety hanaovana izany i Radium.